“TEDxYouth”: afaka naneho hevitra ireo tovovavy | NewsMada
“TEDxYouth”: afaka naneho hevitra ireo tovovavy
Nahafahana nanome sehatra ireo tovovavy hilaza ny heviny ny « TEDxYouth » natao teny Andrainarivo ny zoma teo, nokarakarain’ny Unicef sy ny UNFPA. Tafiditra tao anatin’ny fanamarihana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny ankizivavy ny hetsika.
10 mirahavavy izy ireo no naneho hevitra malalaka, nizara ny fiainany sy nampahafantatra ny olana sedrainy eny anivon’ny fiarahamonina ka mahatonga sakana amin’ny fivoaran’izy ireo. Naneho ny tanjany sy ny fahavononany hioitra amin’ny fiainana ihany koa izy tamin’izany.
Lohahevitra novoizina ny hoe « Ankizivavy matanjaka, tsy hay tohaina ary tsy manana fisalasalana ».
Tanjona ny hanomezana vahana ny ankizivavy sy hampiroboroboana ny tolona ho amin’ny zon’izy ireo. Ireo ankizivavy ireo no ho reny rahatrizay ka mendrika ny hahafantatra ny zony sy hisitraka izany ary hahazo fahalalahana haneho hevitra sy hampahafantatra ny maha izy azy amin’ny fiarahamonina.
Tohin’ny hetsika efa natao tamin’ny 2012 sy ny 2015 ity « TEDxYouth » ity izay nibanjina manokana ny fijoroana vavolombelona sy ny tantaran’ireo ankizivavy vonona hitondra ny fanovana eo amin’ireo fiarahamonina misy azy sy ny sekoliny ary ny fianakaviany. Tanjona amin’izany ny hisarika ireo namany hanana fahasahiana hiova sy hisandratra ihany koa.
Amin’izao fotoana izao, tanora avokoa ny 65%-n’ny mponina eto Madagasikara. Tovovavy sy ankizivavy latsaky ny 25 taona avokoa ny 32,7% amin’izany (manodidina ny 8 tapitrisa).
Eto Madagasikara, mbola misedra olana betsaka ny tovovavy eny anivon’ny fiarahamonina misy azy, indrindra manoloana ny fomban-drazana ka tsy hahafahany mivoatra, toy ny fandraisana fanapahan-kevitra, fampanambadiana azy ireny aloha loatra izay mitarika amin’ny vohoka aloha loatra sy tsy nirina. Manginy fotsiny ny herisetra na saina na vatana, ny famiravirana, ny asa mamoafady sy mamohehitra.